आज सुर्यग्रहण: कुन राशीको मानिसले के गर्नु उत्तम ? - Nepali Virals
आज सुर्यग्रहण: कुन राशीको मानिसले के गर्नु उत्तम ?
२६ फाल्गुन २०७२, बुधबार ०६:३८	2,349 पटक-पढिएको
आज बिहान ६ बजेर १९ मिनेटमा सूर्य ग्रहण सुरु भएको छ । ६ बजेर २८ मिनेटमा मध्य र ७ बजेर २ मिनेटमा मोक्ष हुन्छ । बिहान ८ बजेर ६ मिनेट सम्म औशी तिथि रहेको छ । त्यसपछि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा लाग्नेछ । प्रचलित ज्योतिषशास्त्र अनुसार ग्रहण लाग्दा चन्द्रमा पुर्वभाद्रा नक्षत्र कुम्भ राशीमा भ्रमण गर्दै हुनेछ ।
जसलाई आधार बनाएर फल बताउँदा पूर्वभाद्रा नक्षत्र एवम कुम्भ राशी भएका व्यक्तिहरुलाई अती कस्ट पुग्ने भन्न सकिन्छ । यस्तो समयमा कुम्भ राशीका व्यक्तिले बिशेष सचेत रहनुपर्दछ । उनीहरुले ग्रहण वार्दै दान दक्षिणा एवं इस्वर आराधना समेत गर्नुपर्छ ।
सुर्यग्रहण बीच सबै सुभ कार्य निषेध गरिएको हुन्छ यद्दपी हिन्दु परम्परा अनुसार भगवानको नाममा जप र दान दक्षिणा गर्नाले यो अवधिमा शुभ हुने विश्वास गरिन्छ । सुर्यग्रहणको समयमा गरिएको दान तथा मन्त्रजपले छिट्टै फाइदा गर्ने विश्वास रहेको छ ।
सुर्यग्रहणको समयमा आफ्नो राशि अनुसार निम्न अनुसारको दान-पुण्य गरेर लाभ उठाउन सकिने बिश्वास रही आएको छ । धार्मिक मान्यता अनुसार ग्रहणको समयमा मैथुन, भोजन गर्नुहुँदैन । त्यस्तै सुत्नु एवम गर्भवती महिला बाहिर निस्कनुहुँदैन ।
यो राशी हुनेहरुले सखर, रातो कपडा, मुसुरोको दाल र रातो बस्तु दान गर्नु राम्रो मानिन्छ।
यो राशि भएका व्यक्तिले चामल, कपुर, सेतो कपडा या दुध दान गर्नु लाभदायक छ।
यो राशि भएकाले हरियो पात भएको साग सब्जी, हरियो दाल, मुंगीको दाल, हरियो कपडा दान गर्नु राम्रो हुने छ।
यो राशी भएका व्यक्तिले दहि, सेतो कपडा, दुध, चांदी र चिनीको दान गर्नु राम्रो हुन्छ। यो बस्तु दान गर्नाले आकस्मिक संकटबाट बचाउने छ।
यो राशी भएका व्यक्तिले तामाको सिक्का, तामाको भाडा, गहुँ, पिठो, स्याउ र कुनै पनि गुलियो फल दान गर्नाले ग्रहणको अशुभ प्रभाबबाट बच्न सक्ने बिश्वास छ ।
यो राशी भएकाले सब्जी, आवश्यक भोजन, पानि, अलैची र सर्बत दान गरे राम्रो हुनेछ। यसबाट परिवारको सदस्यको जीवनको रक्षा हुने छ।
यो राशि भएकाले मन्दिरको पुजा सामग्री, कुचो, अगरबत्ति, दियो, घिउ दान गर्नु पर्ने हुन्छ। यी बस्तुहरु दान गर्नाले भाग्य राम्रो हुने छ।
यो राशी बहेकाले पहेलो बस्तु, पहेलो मिठाइ, बेसार, उखु, उखुको रस, सखर। चिनी र चन्दन दान गर्नु राम्रो मानिन्छ। यसबाट कारोबार र रोजगारीमा भएको बाधा हट्नेछ।
यो राशी भएकाले चना, बेसन, कसर, मिठाइ, चांदी र घिउ दान गर्नु राम्रो मानिन्छ।
यो राशी भएकाले चना, पापड, माटोको भाडा, तिल, सरसो र काइयो दान गर्दा राम्रो हुनेछ। यसबाट अनिष्टबाट छुट्कारा पाइने विश्वास छ।
यो राशी भएकाले इन्धन, पिठो, मासाला, हनुमान चालिसा, दुध दान र गरिबहरुलाई भोजन गराउनाले पनि अन्न धनको संकटबाट मुक्त हुने विश्वास गरिएको छ।
यो राशी भएकाले चराचुरिंगीलाई दाना खुवाउने, कमिलाको प्वालमा सखर र पिठोको मिश्रण चढाउने गर्नाले अनिष्टबाट छुटकारा पाउने विश्वास गरिएको छ। साथै गरिबहरुलाई भोजन गराउनाले अध्यन र कारोबारमा भएको बाधा हट्ने विश्वास गरिएको छ।
कुन राशिलाई कस्तो छ ग्रहण ?
मेष : लाभ
बृष : सुख
मिथुन :मान नाश
सिह : स्त्रिपिडा
तुला : चिन्ता,
बृश्चिक : व्याथा
धनु : श्रीप्राप्ती
मकर : क्षति
कुम्भ : घात
मिन : व्यय
ज्योतिषशास्त्रअनुसार ग्रहण लागेको समयमा यी कामहरु गर्न बर्जित गरेको छ ।
१. ग्रहणको समयमा मैथुन अर्थात सेक्स कृयाकलपाहरु गर्नु हुदैन ।
२.ग्रहणको समयमा खानेकुराहरु खानु हुदैन ।
३.ग्रहणको समयमा सुत्नु हुदैन यदि सुतिरहनु भएको छ भने ग्रहण लागेको समयमा उठेर बस्नुपर्दछ ।
४.बिशेष गरी ग्रहण लागिरहेको समयमा गर्भवती महिलाहरुले घर बाहिर निस्कनु हुदैन ।
५.कुन कुन राशीवाला मानिसहरुले ग्रहण अवलोकन गर्न हुन्छ भन्ने कुरा ज्योतिषीहरुसँग बुझेर मात्र ग्रहणको अवलोकन गर्नुहोस् ।
यी बाहेक ग्रहण सकिएपछि नुहाएर शुद्ध भएर मात्र भोजन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा धर्मशास्त्रहरुमा लेखिएको छ जसमध्ये केही कुराहरुलाइ बिज्ञानले समेत स्विकारेको छ ।
घरमा कहिल्यै राख्न नहुने ६ वस्तु
अघिल्लो सलमान खानका गोप्य १० रोचक तथ्य जुन तपाईलाई थाहै छैन
पछिल्लो महिलाका ९ अनौठो तथ्य जुन तपाई थाहै छैन